မြန်မာနိုင်ငံ ကျောက်မျက် လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း၏ အလုပ်အမှုဆောင်၊ ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် ရွေးချ?? - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံ ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း အလုပ်အမှုဆောင်နှင့် ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင်ရွေးချယ်ပွဲကို မတ် ၁ဝ ရက်တွင် နေပြည်တော်၌ ကျင်းပလျက်ရှိရာ အဆိုပါရွေးချယ်ပွဲကို မန္တလေးအသင်းသားများအနေဖြင့် ကန့်ကွက်ကြောင်း မန္တလေး မြို့ရှိ မီဒီယာစင်တာ (မန္တလေး)၌ ကျင်းပသည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် အသင်းသားများက ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”မန္တလေးမှာရှိတဲ့ အသင်းသား တွေ မဲပေးခွင့်ရှိသူ နည်းနေတာဟာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က နေ အသင်းအဖွဲ့စည်းမျဉ်းကိုကျော်လွန်ပြီး စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် တွေ ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာပါတဲ့သူ တွေကို ဥပဒေအကြံပေးတွေနဲ့တိုင် ပင်ပြီး တရားစွဲဆိုသွားဖို့ လုပ်သွားမယ်။ ဒီနေ့ နေပြည်တော်မှာ ရွေး ကောက်ပွဲလုပ်နေတယ်။ နောက်ပိုင်းအတည်ပြုလာတဲ့ အလုပ်အမှု ဆောင်တွေနဲ့ ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် တွေအားလုံးကို ကျွန်တော်တို့ မန္တလေး ကအသင်းသားတွေအနေနဲ့ လုံးဝလက်ခံသွားမှာ မဟုတ်ဘူး”ဟု မန္တလေးမြို့မှ အသင်းသား ကျောက် မျက်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ကိုကျော်ဇောအောင်က ပြောသည်။
ယင်းသို့ ကန့်ကွက်ရခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံကျောက်မျက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတွင် အသင်းဝင်တစ်သောင်းကျော်ရှိသော်လည်း အလုပ်အမှုဆောင်နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ရွေးချယ်ပွဲ၌ မဲပေးရွေးချယ်ခွင့်ရှိသူမှာ ၃၈၃ ဦးသာရှိနေ ခြင်းကြောင့် ကန့်ကွက်ခြင်းဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ အသင်းအဖွဲ့စည်းမျဉ်းတွင် အသင်းဝင်သက်တမ်း နှစ်နှစ်ရှိလျှင် အသင်းချုပ်၏မည်သည့်နေရာ၊ မည်သည့်ရာထူးကိုမဆို ယှဉ်ပြိုင်နိုင် ကြောင်း ဖော်ပြထားသော်လည်း ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေး ကြီးကြပ်မှုကော်မရှင်က ကုမ္ပဏီသက်တမ်း နှစ်နှစ်နှင့် BOD သက်တမ်းနှစ်နှစ်ရှိမှ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ပြုမည်ဟု ကန့်သတ်ထားသည့်အပြင် အသင်းဝင်သက်တမ်း တစ်နှစ်ပြည့်ပြီးသူတိုင်း မဲ ပေးပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း ပါရှိသော်လည်း ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေး ကြီးကြပ်မှုကော်မရှင်က မြန်မာ့ကျောက်မျက် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း (အစိုးရ)၏ လိုင်စင်ရှိမှသာ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိမည်ဟု ထုတ်ပြန်ထားသည်။
”စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေက ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းရှင်တွေ မဲ ပေးခွင့်မရအောင် လုပ်ပစ်လိုက်တာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်တော်တို့ ကန့်ကွက်နေခဲ့တာပါ။ အခု သူတို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ မဲပေးခွင့်ရှိသူက တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့မှသုံးရာကျော်ပဲရှိပါတယ်။ အစွန်းထွက်တောင်မရှိပါဘူး”ဟု မဟာ အောင်မြေကျောက်မျက်ရတနာ ရောင်းဝယ်ရေးစခန်း အကျိုးတော် ဆောင်ကော်မတီမှ အတွင်းရေးမှူး ဦးမျိုးမြင့်နိုင်က ပြောကြားခဲ့သည်။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်း အတာအရ ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ အသင်းဝင် ၁ဝ၄ဝဝ ရှိပြီး ကြီးကြပ်မှုကော်မတီကထုတ်ပြန်သည့် မဲပေးခွင့်ရှိသူအရေ အတွက်မှာ ၃၈၃ ဦးသာရှိကြောင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် အသင်းဝင် ၇၉၄၃ ဦးရှိသော်လည်း မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူမှာ ၉၃ ဦးသာရှိ ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ သိရသည်။
ဒီမိုကရေစီ ပညာရေး သပိတ် စစ်ကြောင်း အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲခံရခြင်း သုံးနှစ်ပြည့် ကျင်းပ
လက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်ကို ပြည်သူတွေ အားမရဟု JMC-U ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ(၂) ပြော
မုံရွာမြို့လယ်ရှိ ပညာ့အလင်း ခေတ်မီ စာကြည့်တိုက်ကို အဆင့်မြှင့်၍ ပြန်ဖွင့်ပေးရန် အဆို စစ်က??
မြန်မာ့ ခရီးသွားဘဏ် လီမိတက် စတင်ဖွင့်လှစ်
ဇာတ်ညွှန်းအနုပညာ ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲကို ပညာဒါနအဖြစ် မန္တလေးတက္ကသိုလ်နှင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရှိ မြန်မာစာဌာန၌ ကျင်းပမည်